९ दिनको शिशुलाई एक्लै बनाएर कोरोनाले लग्यो संसार देखाउँने निर्दोष आमा ! – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /News/९ दिनको शिशुलाई एक्लै बनाएर कोरोनाले लग्यो संसार देखाउँने निर्दोष आमा !
काठमाडौं। काभ्रेको धुलिखेल अस्पतालमा मृ’त्यु भएकी सुत्केरी महिलामा कोरोना भाइरस संक्रमण भएको पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले मृ’तक महिलामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको बताएको छ । कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेमा सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबीसे नगरपालिका-९ निवासी २९ वर्षीया सावित्री तिम्सिना रहेकी छन्।
कोरोना संक्रमणको शंकामा उनको स्वाब परीक्षणका लागि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकु पठाइएकोमा ‘रिपोर्ट पोजिटिभ’ आएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । को’रोना संक्रमितको उपचारका लागि तो’किएको धुलिखेल अस्पतालमा सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे नगरपालिका–९ घर भएकी २९ वर्षीया युवतीको १ जेठ राति मृ’त्यु भएको थियो।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा नौ दिनअघि सु’त्केरी भएकी उनलाई अस्पतालबाट घर फर्केपछि श्वा’सप्रश्वासमा स’मस्या देखिएको थियो र त्यसपछि धुलिखेल अस्पताल पु¥याइएको थियो। धुलिखेल अस्पतालका डा. रमेश मकाजु श्रेष्ठका अुनसार अस्पताल पु’र्‍याउनासाथ उनको मृ’त्यु भएको थियो। त्यसपछि धुलिखेलमै गरिएको स्वा’ब परीक्षणमा उनमा को’रोना संक्रमण देखिएको थियो। त्यसलाई पुनः पुष्टि गर्न उनको स्वा’ब संकलन गरेर परीक्षणका लागि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, टेकु पठाइएको थियो।